राष्ट्रिय सभामा कोरोनाभाइरस बारे प्रधानमन्त्रीले राखेका ६ भ्रामक 'तथ्य' - Nepal Factcheck
राष्ट्रिय सभामा कोरोनाभाइरस बारे प्रधानमन्त्रीले राखेका ६ भ्रामक ‘तथ्य’
राष्ट्रिय सभाको २०७७ असार ४ गते बिहीबारको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब २ घण्टा लामो प्रवचन दिए। त्यस क्रममा उनले विभिन्न विषयमा आफ्नो विचार राखेका थिए। त्यसमध्ये कोरोनाभाइरस बारे राखेका तथ्यहरुको हामी जाँच गर्दैछौँ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई : जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना संक्रमित पाइयो भने त्यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाटै निधन भएको मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देश छ। त्यो मापदण्ड बनाएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले।
तथ्य : प्रधानमन्त्रीले यो विषय धेरै पटक धेरै ठाउँमा उठाएका छन्। हरेक पटक उनको जिकिर कोरोनाबाट मरेका हैनन्, अरु रोगका कारण मरेका हुन्, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका कारण कोरोनाकै कारण भएको घोषणा गर्नुपर्‍यो भन्ने रहन्छ। हाल अमेरिकाको एटलान्टास्थित जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीमा अनुसन्धानरत जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्काका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाइडलाइन्स मात्र तयार पार्ने हो, निर्देशन दिने हैन। त्यो गाइडलाइन्स पालना गर्ने कि नगर्ने कुनै पनि देशले आफै विचार गर्न सक्छन्। ‘डब्लुएचओले निर्देशन दियो भन्ने कुरा नै गलत हो’, डा. खड्का भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री भने जस्तो जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना संक्रमित पाइयो भने कोरोनाबाटै निधन भएको भनेर डब्लुएचओले भनेको छैन।’
डब्लुएचओको गाइडलाइनमा कोरोनाका कारण हुने संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको, संक्रमण प्रमाणित वा सम्भावित संक्रमित भएको अवस्थामा मृत्यु भएको खण्डमा कोरोनाका कारण मृत्यु मानिने छ लेखिएको छ। तर स्पष्टसँग कोरोनासँग असम्बन्धित ट्रमा जस्ता कारणले मृत्यु भएको खण्डमा सो मृत्युलाई कोरोनाका कारण मानिने छैन भन्ने गाइडलाइन छ।
त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण भएको मृत्युलाई अन्य रोग (उदाहरणका लागि क्यान्सर) का कारण मृत्यु भएको मानिने छैन। पहिलेदेखि रहेका केही रोगहरुले गम्भीर प्रकृतिको कोरोना रोगको लक्षण देखिने भए पनि मृत्युलाई यी पूर्ववत रोगका कारण भएको मानिने छैन भनी गाइडलाइन्समा उल्लेख छ।
गाइडलाइन्स यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
त्यसैले जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि कोरोना संक्रमित पाइयो भने कोरोनाबाटै निधन भएको मान्नुपर्छ भन्ने डब्लुएचओको निर्देश छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई गलत छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई : प्रति १० लाखमा संक्रमित संख्या २४७ छ। प्रति १० लाखमा परीक्षणको संख्या १३ हजार १६६ छ जुन अरु धेरै देशहरुभन्दा हाम्रो स्थिति छ। साउथ एसियामा भने भुटानबाहेक हामी नै माथि छौँ।
तथ्य : प्रति १० लाखमा परीक्षणको यो हिसाब वर्ल्डोमिटर्सबाट लिइएको हो। यसमा परीक्षणको तथ्याङ्कमा आरडिटी र पीसीआर दुवैको जोडिएको छ। नेपालको कूल परीक्षण संख्या ३ लाख ९८ हजार राखिएको छ। यसमा आधाभन्दा बढी अर्थात् २ लाख ४३ हजार आरडिटी परीक्षण हो। आरडिटी परीक्षणलाई भरपर्दो मानिन्न। पीसीआर परीक्षणको मात्र तथ्याङ्क निकाल्दा प्रति १० लाखको परीक्षणको संख्यामा कमि आउँछ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले साउथ एसियामा भुटानबाहेक हामी माथि छौँ भने पनि आरडिटी र पीसीआर दुवै जोडिएको अवस्थामा पनि नेपालभन्दा माथि भुटान र भुटानभन्दा पनि माथि माल्दिभ्स छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भनाई पनि गलत छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई : जन्डिसमा बेसार खान हुँदैन।
तथ्य : जन्डिसकै उपचारमा लाग्दालाग्दा ट्विटरको बायोमै ‘जण्डिस भनेको रोग होइन, रोगको लक्षण मात्र हो भनेर नेपालीलाई बुझाउन लागिपरेको मान्छे’ लेखेका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर सुधांशु केसीले प्रधानमन्त्रीले गलत सूचना दिएको बताएका छन्। उनले ट्विट गरेका छन्-
यसरी गलत सुचना जनतालाई दिन हुन्न प्रधान मन्त्रीज्यु । कुन किताबमा लेखेको छ जण्डिसमा बेसार खान हुन्न भनेर ? #EnoughIsEnough pic.twitter.com/B5FWfwUCzC
— Sudhamshu K.C. (@Drsudhamshu) June 18, 2020
उनले बेसार बारे आफ्नो पुरानो ट्विटहरुको संग्रह पनि राखेका छन्-
बेसारोलोजी ! https://t.co/sEHhtNQLGe pic.twitter.com/DZIDMT2aUo
प्रधानमन्त्रीको भनाई : इटाली जस्तो देशले पनि (कोरोना संक्रमितलाई) सडकमा लगेर राख्नुपर्‍यो। आइसियुको सेवा सडकबाट दिनु पर्‍यो।
तथ्य : आइसियुको सेवा सडकबाट दिइएको होइन। अस्पतालहरुमा चाप बढेपछि अस्पतालबाहिर नयाँ बिरामीहरुलाई पालभित्र र गोदाममा राखेर उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्य एकदमै खराब भएकाहरुलाई मात्र आइसियुमा राखिएको थियो। यसबारे बीबीसीले रिपोर्ट बनाएको छ। सडकबाटै आइसियु सेवा दिइएको भन्नु भ्रामक हो।
प्रधानमन्त्रीको भनाई : अब भगवानको भरोसा छ हामीबाट केही हुनसक्दैन भनेर विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमुखले भनेको र लाचारी प्रकट गरेको हामीले देख्या छौँ।
तथ्य : प्रधानमन्त्रीले मात्र हैन, यस्तो कुरा तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएकै होला। एउटा उदाहरण तल छ। यो पनि इटालीसित नै सम्बन्धित हो।
तर यो गलत हो। हामीले मार्च २६ मा नै यसबारे फ्याक्टचेक गरिसकेका छौँ- नपत्याउनुस्, इटालीका प्रधानमन्त्रीले आत्मसमर्पण गरेका छैनन् पोलिटीफ्याक्टले पनि इटालीका प्रमले यसो नभनेको फ्याक्टचेक गरेको छ। यसरी हुँदै नभएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा राख्नु गलत हो।
प्रधानमन्त्रीको भनाई : कोरोनाले छुने बित्तिकै मर्छु अब म, गएँ भन्ठान्यो भने बाँच्न झन् गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुघाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्युँ साछ्युँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानु पर्छ, उडाइदिनु पर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नु पर्छ। त्यो मनोबल राख्नुपर्छ।
तथ्य : प्रधानमन्त्रीको भनाईको पहिलो वाक्य सही हो। कोरोना लाग्ने बित्तिकै सबै मरिहाल्ने होइन। डब्लुएचओको बिहीबार रातिसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर ८२ लाख संक्रमित हुँदा ४ लाख ४५ हजारको मात्र मृत्यु भएको छ। त्यसैले कोरोनाले छुने बित्तिकै मर्छु भनेर डराउनु हुँदैन। आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ।
तर त्योसँगै प्रधानमन्त्रीले भनेको अर्को कुरा भने घातक हुनसक्छ। कोरोनाभाइरस रुघाखोकी जस्तो होइन। यो लाग्यो भने हाछ्युँ साछ्युँ गरेर उड्दैन। कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिको मुख वा नाकबाट निस्कने छिटाबाट अरु व्यक्तिमा सर्ने हुँदा हाछ्युँ गर्दा निकै सतर्क हुनुपर्छ। कुहिनाले नाकमुख छोप्नु पर्छ। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो कोरोना संक्रमित व्यक्तिले रुघाखोकी जस्तो सामान्य ठानी जसको अगाडि पनि वा भिडभाडमा खुला रुपमा हाछ्युँ गर्‍यो भने यो अरुलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैगरी तातोपानी खाएर कोरोना हराउने कुरा पनि गलत छ। कोभिड-१९ फ्याक्ट्स, युरोन्युज, हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ, बीबीसी, फर्स्टपोस्ट ले तातोपानी, तातोपानी र नून, ताताे पेय पदार्थ खाएर कोरोना नहराउने फ्याक्टचेक गरेका छन्।
नेपालको दोस्रो कोरोना संक्रमित प्रसिद्धी श्रेष्ठले ट्विटरमा कोरोना संक्रमित हुँदाको अनुभव लेख्दै यसलाई सामान्य रुघाखोकी जस्तो नठान्न आग्रह गरेकी छिन्। ‘कोभिड-१९ संक्रमितको अनुभव र यसको लक्षण थाहा पाएको हिसाबले म भन्छु- यो रोग सामान्य रुघाखोकी जस्तो होइन’, उनले लेखेकी छिन्।
As someone who experienced COVID-19 and its symptoms, I have got to say that the disease is NOT likeageneral flu. Patients run out of breath, energy, appetite and motivation. Please don’t disregardapatient’s pain for the sake of your entertainment. Enough with this nonsense. https://t.co/P2PfvAIq5N
— Prasiddhi Shrestha (@Prasiddhi_S) June 18, 2020